Dadka reer Muqdisho oo Walaac ka Muujiyey Jugta xoogga leh oo Magaalada Muqdisho laga maqlo mararka qaar | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Dadka reer Muqdisho oo Walaac ka Muujiyey Jugta xoogga leh oo Magaalada...
Dadka reer Muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay ahaa kuwo dhegaha u taagnaa, kadib markii ay soo kordheen qaraxyada magaalada ka dhacayay, waxaana marka dhawaaq ama jug aad maqasho qof walba wacaya asxaabtiisa.
Goor dhow oo magaalada laga maqlay jug culus ayaa dadka ay ku jahwareereen, waxaana durba dadka ay ahaayeen kuwo taleefanada iska wacayay, si ay bal wax u ogaadaan.
Jugta qaar ayay dadka ku qiyaasayeen qaraxyo waa weyn oo magaalada gudaheed ka dhacay, halka qaarna ay u qaateen inuu ahaa is qarxin, waxaana markii dhawaaqa dhacay magaalada ay noqotay mid isla gariirtay, oo dadka ay is weydiinayeen halka uu ka dhacay.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Madiina ayaa inoo sheegay inuu maqlay dhawaaq xoog leh oo qarax ahaa, uuna dhulka iyo saqaafka guriga la gariiray.
Xiriiro aan la sameynay dhinacyo kala duwan si aan wax uga ogaano qaraxa xooga leh ee magaalada laga maqlay ayaa naloogu sheegay inuu ahaa miinooyin ay Ciidamada AMISOM ku qarxiyeen meel banaan oo ku dhow Warshadii Nacnaca, halkaasoo xarun ku leeyihiin AMISOM.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada AMISOM ay maalmihii u dambeeyay walxaha qarxa iyo miinooyin ka soo uruuriyeen magaalada, isla markaana ay ku qarxiyeen goob banaan aheyd oo dhinaca deegaanka Jazeera ku yaal.
Jimcihii la soo dhaafay ayaa sidan oo kale AMISOM waxay miinooyin ku qarxiyeen dhinaca wadada aada Jazeera, oo ahaa meel banaan oo cidla ah.
Si kastaba ha ahaatee dadka reer Muqdisho ayaa noqday kuwo dhegaha mar walba u taagan, iyadoo cabsida ay sii dheer tahay, marka aad gaariga ku dhex mareysid wadooyinka, waxaana isku dhib qaba gaadiidka yar yar iyo kuwa ay wataan ciidamada dowladda oo ka cabsi qaba gaadiidka lagu qarxiyo, iyagoo qoryo ku taagaya gaadiidka si aanu ugu soo dhowaan.
Previous articleGolaha Wasiirada Soomaaliya oo isku shaandheyn iyo ballaaran lagu sameynayo (Warbixin)
Next articleGolaha Wasiirada oo dood culus ka yeeshay shaqaalaha Ajaaniibta ee sida sharci darada dalka uga shaqeeya